မြီးကောင်ပေါက်များ၏ကျန်းမာရေးအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပေါင်းသင်းခြင်း (၂၀၁၁) - ၇ မှ ၉ တန်းကျောင်းသားများ၏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုကြသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
comments: မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 47% အဆင့် 7-9, အသုံးပြုမှု porn ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံးယောက်ျားဖြစ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းအဘယ်အရာဖြစ်ပါ့မလား သို့မဟုတ်အားလုံးကို 9th တန်းအထီး?
Cent က EUR J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2011 Dec;19(4):205-9.
ကင်မ် Y ကို.
ရင်းမြစ် - အားကစားသိပ္ပံဌာန၊ ဆိုးလ်အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ၁၇၂ Ganglionic dong, Nowon gu, 172-139, Seoul, Korea ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကိုရီးယားမြီးကောင်ပေါက်တစ်ကျပန်းနမူနာနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုများ၏ဆက်ဆံရေးကြားတွင်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူများပျံ့နှံ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ကျပန်း, Dobong-Gu ခရိုင်အတွင်းရှိ 885 အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းကနေဆိုးလ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်7ကျောင်းသားများကို 9th ထံမှ 3th တန်းမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ လေးအဘိဓါန်ကိုးရီးယားဗားရှင်းအတိုင်းအတာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ frequency ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဆက်စပ်မှု analysis နှင့်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ကိုရီးယားမြီးကောင်ပေါက်ပြဿနာ (ဎ = 67%) အစာစားခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ (ဎ = 54%), အရက် (ဎ = 69%) သောက်သုံးခြင်း, ဆေးလိပ်သောက် (ဎ = 49%) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ဎ = 57%) မြင့်မားပျံ့နှံ့ပြသ , နှင့်ကြည့်ရှု ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း (ဎ = 47%) ။
ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုသုံးခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို (multidimensional ထိန်းချုပ်မှုကျန်းမာရေး locus, Self-ထိရောက်မှုနှင့် Self-လေးစားမှု) သိသိသာသာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ထင်ရှားနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူများအတွက်အကောင့်မှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ (R2 = 0.42 များအတွက် ပြဿနာအစာစားခြင်းအဘို့အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရက်မသောက်ဘို့, တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်, စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်, ဆေးလိပ်သောက်ဘို့ 0.33 0.31 0.28 ညစ်ညမ်း, 0.26 ကြည့်ရှုဘို့လှုပ်ရှားမှု, 0.19 နှင့် 0.15) ။